Hita tanaty Fandikàna teny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Novambra 2018 5:45 GMT
Iray amin'ireo fanamby lehibe indrindra amin'ny fampandehanana ny adihevitra eratany ety anaty aterineto ny fandikana teny. Tsy zavatra moramora ny manolotra hevitra sy fandinihana amin'ny teny sy kolontsaina iray ho any an-kafa ary matetika mandany fotoana bebe kokoa noho ny fanoratana ilay lahatsoratra tany am-boalohany. Na izany aza, mirotsaka hanolotra feo betsaka amin'ny fiteny samihafa ny Global Voices. Mety ho nahatsikaritra ny fiakaran'ny fandrakofana ny tontolon'ny blaogy amin'ny teny Frantsay izay ataon'i Alice Backer ianao, sy ireo blaogera miteny Arabo avy amin'i Haitham Sabbah, toy ny fandikako manokana sy ny an'ireo mpirotsaka an-tsitrapo, avy amin'ny teny Espaniola mankany amin'ny teny Anglisy ihany koa. Toy izany koa, matetika adika amin'ny tenim-pirenena hafa ireo lahatsoratry ny Global Voices toy ny fandikana an-tsitrapo ataon'i Portnoy amin'ny teny sinoa sy ny fandikana isan-kerinandro ataon'i Miguel Esquirol momba ny fandrakofan'i Eduardo Ávila an'i Bolivia.
Kisendrasendra fotsiny, napetraky ny UNESCO ho Andro Iraisam-pirenena natokana ho an'ny Tenim-pirenena ny omaly, ka ny lohahevitra tamin'ity taona ity dia natokana ho an'ny ”tenim-pirenena sy ny habaka an-tambajotra”. Vitsy ny resaka naterak'izany tao amin'ny tontolon'ny blaogy, fa feno zavatra mahaliana sy manome vaovao maro be ilay tranonkala, anisan'izany ny rohy mankany amin'ireo tetikasa mifandraika amin'izany sy ilay Atlas nasiana fanavaozana, saritany goavan'ny Tenim-pirenena Maneran-tany Atahorana Hanjavona (blaogera firy no fantatrao manoratra amin'ny teny Wayuu?)
Toa manomboka mahazo vàhana anefa ny hetsika santatra hafa izay mampiroborobo ny fahamaroan'ny teny an-tambajotra. I Liz Henry avy amin'ny Blaogin'ny Fikambanana Amerikana Mpandika Teny Literaly no hery mitarika ao ambadiky ny Fetiben'ny Fandikana Blaogy voalohany amin'ity taona ity, izay ho atao amin'ny Talata 28 Febroary.
Milaza i Henry fa avy tamin'ny resaka mikasika ny fitorahana blaogy amin'ny tenim-pirenena roa nandritra ny fivoriana BlogHer farany teo ilay hevitra. Anisan'ireo mpandray anjara maro be i Patrick Hall izay milaza fa handika lahatsoratra avy amin'i Welsh ho amin'ny teny Anglisy ary i Darren Kuropatwa, mpampianatra matematika any Kanadà izay mampiasa tranonkalam-blaogy an'efitrano fianarana ary manamarika fa ”miteny tenim-pirenena samihafa mihoatra ny 50 ny mpianatra ao amin'ny toerana fianarana ampianarako” noho izany, tena mahaliana ahy ny hampitombo ny fampidirana ny asan'ireo mpianatra amin'ny tenim-pirenen'ireo Ray aman-dreniny.
Raha toa ka liana amin'ny fandraisana anjara amin'ilay Fetiben'ny Fandikana Blaogy ianao, aza adino ny mitsidika ny lahatsoratra fanambaran‘i Liz Henry. Raha toa ka liana amin'ny firotsahana an-tsitrapo ho mpandika teny ho an'ny Global Voices ianao, mba mametraha fanehoankevitra etsy ambany.